Su'aalaha Bixiyaha ee Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Su'aalaha Bixiyaha
Waqti yari ku lumiso helitaanka jawaabaha iyo waqti badan daryeelida bukaanka.
Adiga oo ah bixiye CHPW, waxaan kugu taageernay daryeelka xubnahayaga - bukaankaaga. Raadi jawaabaha su'aalaha aad ka heli karto boggayaga bixiyaha, helitaanka tababarka iyo agabka hanuuninta iyo waxyaabo kale oo badan.
Bixiyeyaasha Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo
Sideen ku noqon karaa Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Bixiyaha Washington?
Si aad ugu soo biirto shabakadeena, fadlan buuxi oo soo gudbi khadka tooska ah Foomka Diiwaangelinta Bixiyaha. Waxaan dib u eegi doonaa macluumaadkaaga oo kula soo xiriiri doonaa 30 maalmood gudahood oo ku saabsan codsigaaga. Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir waaxdayada Xiriirka Bixiyaha [emailka waa la ilaaliyay]
Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isticmaalka Jiva?
Haddii aad ku cusub tahay isticmaalka bogga Jiva, akhri annaga hagaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo.
Wixii taageero gaar ah ee bogga ah, fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay].
Sideen ugu diiwaan galiyaa bogga HealthMAPS?
Isdiiwaangeli HealthMAPS halkan. Waxaad ubaahantahay lambarkaaga (ID) -da Aqoonsiga Canshuurta Biilasha si aad isuqorto. Waxay qaadan kartaa 10 maalmood oo taariikheed ah si diiwaangelintaadu u socoto. Waxaad heli doontaa emayl markii diiwaangelintu dhammaato.
Sideen ku ogaan karaa in dawo aan qoro ay ku jirto liiska dawooyinka?
Waxaad dib u eegi kartaa liisaska liiska si loo ogaado daawooyinka ay daboosho CHPW oo u baahan oggolaansho hore. Daawooyinka aan ku qorneyn liiska dawooyinkayagu waxay u baahan yihiin oggolaansho hore. Waxaad ku soo gudbin kartaa codsiyo oggolaansho hore adoo u maraya boggayaga maareynta daryeelka (JIVA.) Daawooyinka is-maamul ee u baahan oggolaansho hore, fadlan la xiriir Qoraallada Degdegga ah 1-844-605-8168 ama isticmaal https://www.CoverMyMeds.com si loo bilaabo hawsha oggolaanshaha hore.
Yaan la xiriiraa xaalad sheegasho, oggolaansho hore, dheefaha xubinta ama u-qalmitaanka xubinta?
Bixiyeyaashu waxay la xiriiri karaan Wakiilka Xiriirka Bixiyaha ama waxay la xiriiri karaan adeegga macaamiisha si ay uga caawiyaan 1-800-942-0247.
Waxaan hayaa bukaan socodsiiyay balankoodii digniin la'aan. Miyaan wali biil ku qori karaa?
Maya. Bukaanka laguma soo dallaci karo ballamaha la seegay. Hubso inay ka warqabaan tirtiridda rugtaada caafimaad ama daahidda ballanqaadyada edbinta.
Bukaankeygu wuxuu ubaahanyahay inuu arko takhasusle ka baxsan shabakada. Weli ma u gudbin karaa iyaga?
Waxaad bukaan socodkaaga u gudbin kartaa adeeg bixiye aan shabakad lahayn adigoon soo gudbin codsi ogolaansho hore.
Haddii aad weli su'aalo qabto, wac Adeegga Macaamiisha si aad u hesho caawimaad. Waxaa la heli karaa 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 pm, toddobo maalmood usbuucii 1-800-942-0247.